अरु के छ त, रेल द्वारा यात्रा एक nomad छ रूपमा अन्य लाभ को धेरै. तपाईं आफ्नो समय मा सबै अनुभव प्राप्त, र रेल तपाईं सजिलै र कुनै पनि बाधाहरु बिना यो गर्न संभावना प्रस्ताव. यो कहिले काँही ढिलो हुन सक्छ, तर यात्रा को यो मोड मा कुनै तनाव त्यहाँ, जबकि विमानहरु एक सम्पूर्ण फरक कुरा हुन्. यदि तपाईं विमान द्वारा यात्रा, त्यहाँ को स्थिर तनाव छ overcrowded विमानस्थलको र overzealous सुरक्षा उपाय. अरु के छ त, केही उदाहरणहरू मा, तपाईं एक रेल लिन यदि तपाईं आफ्नो गन्तव्यमा छिटो प्राप्त!
कसरी पैसा बचत गर्ने जब तपाई घुमन्तेको रूपमा यात्रा गर्नुहुन्छ
सबैभन्दा पैसा ट्रेन यात्रा एक Nomad कोठा बुकिङ जान्छ जब खर्च. तथापि, तपाईं हस्टल बुक यदि, तपाईंले पैसा धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूले होटल भन्दा अधिक किफायती हुनुहुन्छ र एक अझ राम्रो र स्मरणीय अनुभव प्रदान. अरु के छ त, जब तपाईं एक्लै यात्रा, तपाईं यसलाई मा धेरै मानिसहरूलाई कुनै पनि कोठा बुक गर्न सक्नुहुन्छ, जो छ सस्ता विकल्प. र हामीलाई विश्वास, तपाईं यो चाहानुहुन्छ किनकि यसले तपाईंलाई अन्य समान विचारधाराका यात्रुहरूसँग सामूहीकरण गर्न अनुमति दिनेछ.
तपाईँको बचत मा दूर खाने अर्को कुरा हो, राम्रो, खाने. तपाईं छात्रावास वा अपार्टमेन्ट आफ्नो भोजन तयार द्वारा खाना पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ. धेरै जसो होस्टल र अपार्टमेन्टले किचनको प्रस्ताव गर्दछ जुन तपाईं निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. अरु के छ त, को अन्दर अन्य मौका मान्छे संग बाहिरै र केही तयार छ भोजन साझेदारी गर्न.
ट्रेन यात्रा घुमन्ते सल्लाहहरू छन्
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई एक क्रेडिट दिन लिङ्क यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-nomad-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)